मौरीको संगत गर्नुस्, झिंगाको होइनः केपी ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालको पार्टीका लागेका नेता कार्यकर्तालाई एमालेमा फर्किन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौं जिल्लास्तरीय पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी फर्किन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले भने,‘मौरीको संगत गरेर गयो भने फुलवारीमा पुगिन्छ । झिंगाको पछि लागेर गयो भने फोहरको डंगुरमा पुगिन्छ । मौरी यस्ते हो जहाँबाट पनि जे टिपेर ल्याउँछ त्यसले पवित्र मह बनाउँछ । झिंगाले कहिल्यै मह बनाउँछ ? एमाले मौरी जस्तै पार्टी हो । त्यसैले पार्टीमै फर्किनुस्।’
उनले माधव नेपालले व्यक्तिगत रुपमा रिसिवी साँधेर पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘माधव नेपाल घरमा आगो लगाएर खरानी धसेर तीर्थयात्रामा हिँडेकालाई म केही भन्दिन । माधव नेपालको व्यक्तिगत रुपमा जुन खेले खेले आफ्नो स्वार्थका लागि दुनियाँ कार्यकर्ताको जीवनसँग खेलबाड गरे । प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो अब जाने ठाउँ कहाँ छ ? देशको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने ? नेपालको भ्रममा नपरी पार्टीमा फर्किनु ।’
उनले नेकपा एमाले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सवैभन्दा ठूलो शक्तिको रुपमा जनताको भरोसको केन्द्रको रुपमा स्थापित गरेको बताए । उनले एमालेलाई भत्काउन खोजिएको र प्रतिगामी तत्वहरु त्यसमा असफल भएको बताए । उनले माधव नेपालले पार्टी फुटाएपनि पार्टीलाई कुनै फरक नपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘एमालेलाई सिध्याउन खोजिएको थियो । कार्यकर्ता पंक्ति जुरुक्क उठ्यो र गलत तत्वलाई पार्टी कब्जा गर्न दिँदैनौ भनेर उत्रियो र पार्टी जस्ताको तस्तै छ । आजको परिस्थिति यही हो । नेकपा एमालेको भूमिका अलिकति परिवर्तन भयो । सरकारमा थियौं प्रतिपक्षमा भयौं । हाम्रा नीति परिवर्तन भएको होइन, संगठनमा परिवर्तन भएको छैन । सडेका तत्व विग्रेका तत्वहरु गएका मात्र हुन् । भयो त्यत्ति ।’
उनले माओवादी केन्द्र एमालेसँग एकता भएको दावी गरे । उनले भने,‘माओवादी केन्द्र एमालेमा मिलिसक्यो । अव प्रचण्ड गुटमात्र छ । माओवादी केन्द्र उसले नाम पाउन बेग्लै कुरा भयो ।’
उनले माधव नेपाललाई पार्टीमा फर्किन आह्वान नगर्न आग्रह गरे । उनले भने,‘लामो समय सँगै काम गरेपछि साथीहरुलाई माया लाग्छ साथीहरुले भन्ने गर्या छन् पार्टीमा फर्किनु भनेर । तर अब त्यो लोभ छाड्नुपर्छ माधव नेपालको काम छैन ।’
अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टी भित्रबाट माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेर निकम्मा सरकार गठन गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘विकासको गति हाँकिरहेको सरकार ढालेर प्रतिगामी काम भयो । जबसम्म हामीसँग पार्टी छ सवै छ नि । सरकार भए सरकार जान्छ । मजवुत पार्टी छ । अझै एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ । यस्ता सरकार फेरि बनाउँछौं । यो जनताबाट आएको होइन, अदालतको परमादेशबाट आएको सरकार हो ।’
उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको मनोबल घटेको बताए । उनले भने, ‘दुई वर्ष पछि त एक्लै हुन्छु भनेको सुन्नुभयो होला नि ? यो पार्टी विघटन गरे हुन्छ भनेको पनि सुन्नुभयो होला नि ? मान्छेहरुका मनोबल टुटिसकेको छ ।’
मुलुकमा अवसर चुनौती बनेर आयो : प्रचण्ड